नेपालले स्कटल्याण्डको जनमत संग्रहबाट के सिक्न सक्छ? – tistung deurali
Posted on June 25, 2016 June 25, 2016 by tistung
बेलायतसँग नेपालभन्दा युगोस्लाभियाको परिवेश बढि मिल्छ। तर बेलायत वा पश्चिमा युरोपले सामान्य मानेका अभ्यासले त्यति नजिकको भुगोलमा समेत नितान्त फरक रूप लिन्छ। नेपालसँग हुबहु तुलना गर्नु त बौलट्टी नै हो।
स्कटल्यान्डमा केही अघि भएको स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहलाई नेपालसँग जोडेर अनेक टिप्पणी गरिए। हालै संयुक्त अधिराज्य युरोपेली युनियन बाट छुट्टिने भनेर गरेको जनमतसंग्रह बारे पनि टिप्पणी हुँदैछन्। तिनले नेपालमा पार्ने असर र नेपालले तीबाट सिक्न सक्ने पाठहरू बारे अवश्यै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर स्कटल्याण्ड, बेलायत, स्विजरल्याण्ड, अमेरीका, बेल्जियम वा अन्त कतै कुनै प्रणालीले काम गर्यो भन्नुको अर्थ नेपालमा पनि तिनले त्यसरी नै काम गर्छ भन्ने मान्यता निकै खोटपूर्ण छ। त्यसैले स्कटल्याण्ड जस्तै नेपालले पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका टिप्पणी जति अमिल्दा थिए, त्यत्तिकै अस्वाभाविक पनि। किनभने, बेलायतको तुलना नेपालसँग हुनै सक्दैन।
तुलना त अनेकौँ गर्न सकिन्छ। जस्तै ः पोल्यान्डमा कम्युनिस्ट पार्टीको हँसिया-हथौडाको चिह्न प्रयोग र प्रदर्शन गर्नु नै प्रतिबन्धित छ। पोलिसहरू ठान्छन् उनीहरूको इतिहासको ठूलो कलंक कम्यिष्टहरू थिए। पोल्यान्डमा जस्तै जर्मनीमा स्वस्तिक चिन्ह प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्धित छ, हिटलरको पार्टीको चिह्न भएको हुँदा। यो धेरै पूर्वीया परम्पराहरूमा सम्मान गरिएको चिन्ह हो। हिटलरको शासनसँग सम्बन्धित अरू कुनै पनि अभिव्यक्ति एवं क्रियाकलापमा बन्देज गरिएको छ। यसलाई स्वतन्त्रतामाथी अंकुश पनि भन्न सकिन्छ।
संयुक्त अधिराज्य र नेपाल दुई फरक देश मात्रै होइनन्, यिनका परिवेश र भू-राजनीतिक इतिहास पनि नितान्त भिन्नै छन्। स्कटल्यान्ड वा बेलायतको प्रचलन र नियम कानुन अनुसार नेपाल चल्दैन। बेलायतकै पूर्वउपनिवेश भारत स्वयं पृथकतावादी अभियान र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापबारे निकै अनुदार छ। यति नजिकको नजिर छाडेर सीधै स्कटल्यान्डसँगको तुलना/तर्क गर्नु बौलट्टीपूर्ण लाग्छ।
देशका सीमाना मेटिएका छैनन्
Brexit results. Picture: huffingtonpost.co.uk
युनियनको राजनीतिक उद्देश्य सिमानाहरूलाई स्वीकार गर्ने तर तिनलाई अनावश्यक पनि बनाउने हो। काम, व्यापार वा भ्रमण गर्न, आपसी सहयोग, भाइचारा र समझदारी बढाउन र साझा नीति नियमहरू तय गर्न सारा युरोप एकै देशजस्तो छ। यहाँ सिमानाहरू फेरबदलको निम्ति संघर्ष गर्नु अनावश्यक मात्रै होइन, घाटा हुने स्थिति बनेको छ। किनभने, त्यसो गर्दा साझा बजार, आपसी व्यापार र त्यसका फाइदा गुम्नेछ भने रोजगारीका अवसर हराउनेछन्, नागरिक जीवनमा पनि समस्या थपिनेछन्।
युरोपेली युनियनको सदस्य बनेपछि पाइने यस्तै अवसरका कारण चेक गणराज्य टुक्रिने घटना शान्तिपूर्ण र रक्तपातविहीन रह्यो। तर, पश्चिम युरोपेली देशहरू भन्दा भिन्नै राजनीतिक विकासक्रम, भूगोल र इतिहास बोकेको युगोस्लाभिया टुक्रिँदा दसौँ हजारको ज्यान गयो र लाखौँ मानिस विस्थापित भए। करबि एक दशकभन्दा लामो समय चलेका डरलाग्दा युद्धहरूले नेपालभन्दा थोरै मात्र ठूलो युगोस्लाभियालाई सात देशमा टुक्र्याए। जातीय र धार्मिक सफायाको क्रम निरन्तर चल्यो। केही क्षेत्रमा युद्धका घाउ र क्षतिसँग जुध्ने काम अझै सकिएको छैन, सायद पुस्तौँसम्म सकिने छैन। बाल्कन क्षेत्र युरोपकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र बनेको छ। गरबिीसँगै अचेल जातिवाद, नश्लवाद र फासीवादजस्ता नयाँ एवं जटिल समस्या देखा पर्न थालेका छन्। बेलायतसँग नेपालभन्दा युगोस्लाभियाको परिवेश बढि मिल्छ। तर बेलायत वा पश्चिमा युरोपले सामान्य मानेका अभ्यासले त्यति नजिकको भुगोलमा समेत नितान्त फरक रूप लिन्छ। युरोपभन्दा टाढा र नेपालसँग बढी मिल्दाजुल्दा सुडान, श्रीलंका आदि देशमा पृथकतावादले निम्त्याएका समस्याका बारे त भनिरहनै परेन। त्यसबाहेक संयुक्त अधिराज्य फरक-फरक देशको आपसी समझदारीको संगठन हो भने नेपाल एउटा सिंगो अविभाज्य देश। यी देशहरू- बेलायत, वेल्स, स्कटल्याण्ड, र उत्तरी आयरल्याण्ड मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको हुँदा यि देशहरू पहिले जस्तै छुट्टिन पनि स्वतन्त्र छन्। यीनको इतिहास र बनोटको सीधा नेपालसँग तुलना कतैबाट पनि मेल खाने कुरा होइन।
अहिले संयुक्त अधिराज्य आफैँ युरोपेली युनियनबाट अलग्गिने निर्णय गर्न तयार भएको हुँदा अब स्कटल्याण्डलाई युनियन प्रवेशमा अवरोध हुने सम्भावना कम छ। त्यसैकारण अब संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटल्याण्ड र संभवत उत्तरी आयरल्याण्ड पनि छुट्टिने छ। यो प्रकृया लामो हुनेछ र यो कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने बारे ठ्याक्कै भन्न सक्ने कोही छैन। त्यसैकारण यसका प्रभाव र असरहरू के हुन्छन् भनेर अहिल्यै दावी गर्नसकिने अवस्था छैन।
यो लेख आश्विन ५, २०७१ को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख पृथकतावादभन्दा डरलाग्दो लोकप्रियतावाद मा आधारित छ।
← यसकारण नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन
#IamWithDrKC: केसी अनसनको आँखीझ्याल: कहाँ कहाँ चुकेका छौं हामी? →